Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland daah-furka Machadka Cilmi baarista iyo Tababarada ee KAAD
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay wehliyaan Guddoomiye ku xigeenka 1aad Avv: Cabdicasiis Cabdullahi Cusmaan, Guddoomiye ku xigeenka 2aad Mudane,
Madaxweynaha Gal-Mudug oo shir gudoomiyey shirkii Golahiis wasiirada
Madaxweynaha Dowladda Galmudug ayaa shir guddoomiyey kullanka golaha wasiiradda oo ka dhacay magaalada Cadaado. Kulankaan ayaa warbxin looga dhageystay wasaaradaha kala ah: 1. Amniga Gudaha. 2. Arrima
Muqdisho:-Madaxweyanaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay qiimaha xuska Todobaadka Xorriyadda iyo Midnimada dalkeenna ayaa ku booriyey dhammaan muwa
Madaxweynaha Puntland oo gaaray Gaalkacyo [Video]
Gaalkacyo:-Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaaladda Gaalkacayo ee xarunta Gobolka Mudug. Madaxweynaha waxaa garoonka diyaarada
Ciidammada Daraawiishta Dawladda PL ee Beder iyo Uxud oo fariisamahoodii dib ugu laabtay
Qardho-Ciidammada Daraawiishta Dawladda Puntland ee Beder iyo Uxud ee dhoowaan Tabarbarka loo soo xiray ayaa ku laabtay Furimaha Difaaca Puntland. Ciidammadan ayaa loo dhamays tiray dhamaan gabkii Cii
Madaxweynaha Puntland oo tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada Badda Puntland ee PMPF (Masawiro)
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada Badda Puntland ee PMPF. Ciidamada tababarka loosoo xiray oo lasoo laylina